Iko Kubata uye Kushandiswa kweCloud Computing muKugadzira - NewGenApps
Cloud computing, kugadzira, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Iko Kukanganisa uye Kushandisa kweComputer Komputa muKugadzira
Isu tiri pakati peinotevera hukuru hukuru indasitiri shanduko kureva indasitiri 4.0. Inomiririra shanduko yekukurumidza yeiyo kugadzira process nerubatsiro rwe data uye kushandisa michina. Nemakambani makuru ari kutora hofori kusvetuka kuenda kushandisa michina uye maindasitiri IoT tave kuwanda, isu tasvika padanho apo zvakakosha kugadzirisa kuremara mu IT zvivakwa kamwechete zvachose. Neraki, gore kadambari inotibvumidza kushandisa on-kudiwa komputa simba mune inochinjika uye inotyisa nzira.
Cloud computing in kugadzira haisi sarudzo asi mukana. Pamusoro pe90% yemabhizinesi epasi rose anoshuma achishandisa gore kadambari kune chimwe chiitiko chebhizinesi. Yave nguva yekuti vagadziri vakoshese kutamira kune gore. Muchokwadi, pasi rose 66 muzana ye kugadzira makambani kubva kunyika gumi nenomwe ari kutoshandisa cloud kuitisa. Zvinofanotaurwa kuti masevhisi anogarwa nemakore achaverengera inenge hafu yezvese sangano-chikamu chekushandiswa kwesoftware pakati pevagadziri panosvika 17.
Kwayaka: Tsvagiridzo yakaitwa ne American Enterprise Institute pamusoro pekuti Cloud Computing Inogonesa Sei Mazuva Ano Kugadzira, June 2017.
Unoda kubata izvo zvazvino nyowani zveazvino matekinoroji? Tarisa uone zviwanikwa zvedu uye tora zvaunotora.
Nei Cloud Computing Mukugadzira?
Cloud komputa haisi mhinduro asi inogonesa kuita mamwe mhinduro akamboda rinorema komputa simba. Nhasi mamore egore anouya sezvivakwa, chikuva, uye masevhisi. Vagadziri vanogona kusarudza mhinduro yesarudzo uye kuronga danho rekutama muzvikamu. Izvi zvinoita gore rive sarudzo inochinja uye iri nyore.
Cloud inobvumira kuwiriranisa kwedata kubva kwakawanda masosi kuita imwe dashboard. Saka inorerutsira vatariri kubva pamutoro wekufambisa nemaoko data kubva kune imwe system kuenda kune imwe. Nemaindasitiri ari kufamba akananga kushandisa michina mukutarisa uye kutonga kwemaitiro ezvirimwa, zvakakosha kuona kuti data rakafanana pane zvese. Gore rinobatsira mukuenzanisa yedata nekutsanangura imwe poindi sesosi yeruzivo uye nekubvumira kuwana iyo kuburikidza ne Indaneti.
Iko Kukahadzika uye Kuvhiringidzika:
Kufunga gore rawana traction inoshamisa, pane kusagadzikana kwakaramba kuripo zvakare. Chidzidzo chakaitwa na MintJutras paSaaS kugamuchirwa mu kugadzira, kugovera uye mamwe maindasitiri, akapa zvinotevera maonero:
Pakazara 66% yevakabvunzwa kuongororo havana kuziva musiyano uripo pakati peasingaite- uye mazhinji-maroja SaaS zvivakwa
Mukati memakore gumi, SaaS-based application inotarisirwa kukura kubva pa10% kusvika 22% yezvose. kugadzira uye kugovera software.
Izvo zvikumbiro zvitatu zvakakosha zve a SaaS mhinduro kugadzira uye kugovera kunosanganisira kupa vatengi chiyero chekutonga pamusoro pekusimudzira, tsigiro yakatsiga yekushanda kwepasi rose uye kutsigirwa kwekukurumidza uye nguva dzose kusimudzira.
Pakazere kune mamaneja mazhinji anopokana nezve zvinofungidzirwa mabhenefiti uye mari inosanganisirwa mukufamba kune gore. Kune zvakare nyonganiso pakati pevasiri-tekinoroji nezve chiyero uye maitiro ekuita gore mukati kugadzira.
Iko kune nyonganiso kune mukana wekujekeswa. Kunyange zviri nyore kuraira zve kutama kwegore vagadziri vangangoda kushandura yavo yese bhizinesi maitiro kuti vatange iyi shanduko. Izvi zvinoda zano rakakodzera uye vane hunyanzvi hweIT. Kuchengetedza vese vari vaviri kumakambani asiri eIT idambudziko mukati mawo.
Verenga Zvakawanda: 10 Matanho Ekubudirira Kwemakore Kufamba
Tine dhijitari shanduko zano raunogona kushandisa kurerutsa marwadzo ako. Yedu nhanhatu-nhanho fomati yekuita shanduko yedhijitari ichakutungamira kubva mukukanganiswa kusvika pakujeka. Kana zviri zveIT-nyanzvi, haufanire kana kuverenga imwe chinyorwa. At NewGenApps, isu takashanda pane akawanda makore ekushandisa uye takabatsira makambani kuwedzera exponentially kuyera uye kukura kwavo IT kugona. Kana iwe uine chirongwa saka inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.